Sina: Firenena matanjaka, mponina mahantra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2010 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, македонски, Français, srpski, Español, Swahili, polski, English
Nanambara ny fampielezam-peom-panjakana CCTV tamin'ny faha 28 Jona fa manantena ny hahazo hatramin'ny 8 arivo lavitrisa yuan ($1.18 arivo lavitrisa) i Sina hatramin'ny faran'ny taona 2010. Izany tarehimarika izany dia hampiakatra azy ho laharana faharoa amin'ny firenena lehibe indrindra aorian'i Etazonia raha ny vola miditra no jerena. Toa hita fa nahatanteraka ny nofinofiny i Sina dia tsy inona akory izany fa ny ho lasa firenena matanjaka, na dia somary kelikely finoana aza ny mponina eo amin'ny aterineto momba izany vaovao izany satria tsy tsara zara ny harena.
“Ny dingan-dava” eo amin'ny vola miditra.
Manambara i Hou Jinliang, mpitatitra ny zava-miseho amin'ny alalan'ny aterineto fa tsy tanty [tsy zaka] mihitsy izao endrika ” dingan-dava izao”.
Io dingan-dava eo amin'ny vola miditra io dia toy ny olona izay mandray (fanafody mampatanjaka), raha jerena ety ivelany izy dia faran'izay matanjaka mihintsy, nefa raha ny marina dia marefo dia marefo izy ao anaty. Mampiseho ny haben'ny tsy fitovizan-tantana eo amin'ny fizarana ny vola miditra sy ny tsy fisian'ny rariny eo amin'ny fiaraha-monina…ny maripatran'i Gini.
…Ankehitriny, mihazakazaka toy ny sambon-danitra ny vola miditra eo amin'ny firenena ka lasa eo amin'ny laharana faharoa izy eo amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny lafiny iray kosa anefa, mihisatra toy ny fandehan'ny sifotra an-tanety ny fidiram-bolan'ny mponina ao aminy. Raha ny antotan'isan'ny FMI tamin'ny 21 aprily 2010 dia hita fa any amin'ny laharana faha 109 maneran-tany no misy an'i Sina raha eo amin'ny salanisan'ny vola miditra eo amin'ny mponina tsirairay no resahana. Manambara izany fa tsy tokony hisehoseho isika amin'ny “dingan-dava”n'ny vola miditra. Mifanohitra amin'izany aza, tokony hifantoka amin'ny zava-miseho ankehitriny isika.
Namelabelatra mikasika ny fihetsem-po entin'ny tsy fahampiana teo amin'ny olon-tsotra ny mpitoraka bilaogy 171596507.
Misy elanelana goavana eo amin'ny fidiram-bolan'ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka: fidiram-bola manify, tsy fahampian'ny fiarovana ny fiainan'ny sarambabembahoaka sy ny tombontsoan'ny mpiara-belona, tsy fahampian'ny fitandrovana ny fahasalamana ary ny fihenan-danjan'ny fampianarana. Eo amin'ny lafiny hafa, tsy mitsaha-mitombo ny sandan'ny fahadiovana sy ny isan'ny mpanjifa ary avo dia avo ny tahan-ketra tsy maintsy efain'ny vahoaka.
Firenena matanjaka, vahoaka mahantra
Ho famintinana ireo voalaza ireo, nilaza i Bai Yen fa i Sina dia firenena iray matanjaka, saingy ny mponina ao aminy dia mbola mahantra hatrany:
Ato anatin'ity firenena ity, mihamanana hatrany ny manan-karena raha toa ka mihamahantra eny foana ny mahantra. Mihamanam-bola ireo mpitondra ao amin'ny governemanta ary mihasahirana hatrany ny vahoaka.
Ankehitriny, raha mitombo ny fidiram-bolan'ny firenena, dia afaka milalao “olympique” tsara dia tsara sy manao fampisehoana maneran-tany isika mba hampamirapiratra ny endriky ny governemanta.
Raha tsy misy fiovana ny drafitra eo amin'ny fitsinjarana ary na dia manan-karena tahaka ny inona aza ny firenena dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny vahoaka izany.
Governemanta eo an-toerana dibo-trosa
Manambara ny “swlonging” fa mahantra ihany koa ny governemanta.
Mahantra toy ny vahoaka ny governemanta eo an-toerana ary maro amin'izy ireo no bokan'ny trosa. Ny fanovàna ny hetra tamin'ny taona 1994 dia nampiakatra ny fidiram-bolan'ny governemanta foibe fa kosa nampahalemy ny tanjaka ara-bolany governemanta eo an-toerana… Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy mamatsy ny asa ho an'ny vahoaka ny governemanta eo an-toerana ary tsy manana mihitsy fidiram-bola hafa hanorenana foto-drafitrasa. Vokatr'izany, voatery mindram-bola ry zareo. Ny politika ara-toe-karena tamin'ny fiafaran'ny taona 2008 dia nandrisika ny governemanta eo an-toerana hamorona sehatra famatsiam-bola mba ahafahana mahazo famatsiam-bola.
Eny, na ny governemanta isam-paritra aza dia mirotsaka amin'ity endrika famatsiambola ity mba hindramana vola hampandrosoana tetikasa.
Tamin'ny faha 23 jona dia nanambara ny Biraom-pirenena mpanadihady [National Audit Office] fa nampitombo ny dona mahazo ny orinasa ny trosa anatiny. Any amin'ny faritra sasany, mihoatra ny 100% amin'ny fahafahan'ny governemanta ny trosa anatiny…
Manana soso-kevitra maromaro azo ampihariina i Yeh Kai mba hanatsarana ny zava-misy:
1. Ahena ny ampahan-ketra ho an'ny amin'ny GDP [PIB], tazonina ho eo anivon'ny vahoaka ny harena …
2. Manorina rafitra mangarahara ho fanaraha-maso fitantanam-bolam-panjakana. Ny fampahafantarana momba ny toe-bolam-panjakana sy ny fandaniana azy dia tokony hangarahara ary tokony ho azo aseho ny sarambabem-bahoaka…
3. Ahena ny fandaniana ao amin'ny fitantanan-draharaha ary mamoaka vola betsaka mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Somary kivikivy ihany ny vahoaka mahita ny fidiram-bola sy ny fandaniam-bolam-panjakana. Nefa eken'izy ireo soa aman-tsara ny fandaniana raha natao hanatsarana ny fiainany, fa amin'izao fotoana izao, ny ampahany lehibe amin'ny fidiram-bolantsika dia lany ampiasaina amin'ny fitantanan-draharahan'ny governemanta eo an-toerana. Hitantsika taratra izany eo amin'ny fivelaran'ny rafitry ny asam-panjakàna, fiara sy tranobe lafovify ho an'ny governemanta. Amin'ny lafiny hafa kosa, tena tsy mahafapo fampiasam-bola ataon'ny governemanta ho fitsimbinana ny fiaraha-monina, ny fahasalamana ary ny fampianarana. Tsy manam-bola ny olona handehanana any amin'ny toeram-pitsaboana , sekoly sy mba hankafizany ny fiainany mandritry ny fotoana fisotroan-dronono… Ny governemanta foibe dia tokony handroso politika mba hametrahana lalàna mifehy ny fampitovizan-tantana eo amin'ny fandaniam-bola ho an'ny vahoaka sy ny fidiram-bolan'ny governemanta ary hampiakatra tsikelikely io ampahany io mba hanorenana fiaraha-monina mirindra sy salama.